Rose of Sharon: ၂၀၁၂မြန်မာ့နှစ်သစ်အတာသင်္ကြန် ၁၃၇၄ (ဘင်ဂျွန်း၊ဗီယက်နမ်)
၂၀၁၂မြန်မာ့နှစ်သစ်အတာသင်္ကြန် ၁၃၇၄ (ဘင်ဂျွန်း၊ဗီယက်နမ်)
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟိုချီမင်းမြို့အနီးက ဘင်ဂျွန်းမြို့လေးမှာ ပထမအဆုံးအကြိမ် မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်လေးကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်…. ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့ လိုအပ်ချက်တခုမှမရှိဘဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာက ဘင်ဂျွန်းမြို့ခံတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်…. ကျမတို့ဟိုချီမင်းမြို့ပေါ်ကလူတွေက ဧည့်သည်သွားဧည့်သည်ပြန် ဖိတ်ထားတဲ့သူတွေကိုဧည့်ခံရုံလောက်ပါဘဲ… သူတို့တွေကတော့ ပွဲမလုပ်ခင်ထဲက ဆရာတော်ကျောင်းဝင်းထဲကခြံကိုရှင်းလင်းရတဲ့ အလုပ်ကြမ်းကအစ၊ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး အစားအသောက်အတွက် ချက်ပြုတ်ကြရတဲ့အပြင် အစကနေအဆုံး တတပ်တအားနဲ့ ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြတာပါ…. အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင် အလုပ်တဖက်နဲ့ မအားတဲ့ကြားကနေ စိတ်ပါကိုယ်ရောက်အပင်ပန်းခံပြီးဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဘင်ဂျွန်းမြို့ခံမလီကို ဘင်ဂျွန်းမြို့စားကြီးလို့ ရာထူးတပ်ပေးလိုက်ပါတယ်….
တကယ်တော့ဒီပွဲလေးကို သူငယ်ချင်းတွေစကားထိုင်ပြောကြရင်း သင်္ကြန်ပွဲလေးလုပ်ရအောင်လို့ စကားစမိရာကနေ လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ… အသေအချာ အစည်းအဝေးထိုင် ၊ အစီအစဉ်တွေဆွဲပြီး စီစဉ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး…. လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတခုဘဲရှိကြပေမဲ့ အားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ဘို့ နေရာအခက်အခဲကရှိနေတော့ ခြံအကျယ်ကြီးနဲ့ ဆရာတော့်ကျောင်းတော်ကို မျက်စောင်းထိုးခဲ့ကြတာပါ… ဆရာတော်က ဘင်ဂျွန်းမြို့မှာဆိုတော့ ဘင်ဂျွန်းမြို့ကမလီက ဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါ ဆရာတော်ကလည်း မြန်မာတို့ရဲ့ရိုးရာပွဲတော်ကို ဗီယက်နမ်လူမျိုးဒကာတွေကို မြင်ဖူးစေချင်တာကြောင့် ဆရာတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဒီပွဲလေးဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်....
အိမ့်ချမ်းမြေ့April 17, 2012 at 8:01 AMပျော်စရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲကို လာကြည့်သွားပါတယ်..း)Happy New Year!ReplyDeleteAnonymousApril 17, 2012 at 8:23 AMမမနော် တို့ မိသားစုအားလုံး ပျော်ရွှင်စရာ မြန်မာနှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေပိုးပိုးReplyDeleteနေ၀သန်April 17, 2012 at 8:53 AMအစ်မရေ... ဗီယက်နမ်မှာလည်း မြန်မာတွေများတယ်နော်.... ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေ.. ဆုတောင်းပေးပါတယ်..း))ခင်မင်လျက်နေ၀သန်ReplyDeleteချုင်April 17, 2012 at 10:15 AMပျော်စရာကြီး မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါဖောရေ....း)ReplyDeleteNyi Linn ThitApril 18, 2012 at 3:11 AMဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ရတာနဲ့တင် ပျော်စရာကြီး..၊ အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးသွားတာ ကြားရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ...။ReplyDeletesan htunApril 18, 2012 at 6:33 AMပျော်စရာကြီးဗျား..ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေ..ဗွမ်း..ဗွမ်း..ဗွမ်းReplyDeleteညီရဲApril 21, 2012 at 2:54 AMပျော်ရွှင်ဖွယ် သင်္ကြန်လေးပါဘဲ အစ်မရေ... ကလေးတွေအတွက် ပိုပျော်စရာကောင်းမယ်နော်...ReplyDeleteAnonymousApril 21, 2012 at 11:35 AMပျော်စရာပဲ.. သားလေးနဲ့ သမီးလေးက ထွားလာလိုက်ကြတာ..သူတို့ ကြည့်ရတာ ပျော်နေပုံပဲဆက်ရေးနော်.. စင်စင်ReplyDeleteKyaw Hnin Se LwinApril 22, 2012 at 9:38 AMမ သမီးနဲ့သားပိုထွားလာသလို ပိုချစ်ဖို့ကောင်းလာတယ်မျက်နှာလေးတွေကကြည်နေတာပဲReplyDeleteSHWE ZIN UApril 22, 2012 at 7:06 PMပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ညီမရေ သားနဲ့သမီး ကိုလည်း နှုတ်ဆက်ပါတယ်ချစ်တဲ့အမရွှေစင်ReplyDeleteAdd commentLoad more...
ကဗျာတွေရေးချင်နေတယ်... သည်းခံအားပေးကြပါ... :D
Naw PhawCreate Your Badge
လာလည်ကြတဲ့မောင်နှမများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.... တစ်ကြောင်းလောက်ရေးသွားပါ
၂၀၁၂မြန်မာ့နှစ်သစ်အတာသင်္ကြန် ၁၃၇၄ (ဘင်ဂျွန်း၊ဗီယက်န...
လငျးဦး(စိတျပညာ)​မိနျး​မ....တဈခြို့​9 hours ago